डिभोर्स गर्न तयार भएकी शिल्पा पोख्रेललाइ छविराज ओझाको रूवाउने प्रेम पत्र हेरौ !!
निर्माता छवी ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेल सम्बन्ध विच्देछको संघारमा छन् एता उनै जोडीको बास्तबिकतालाइ कथाको रुप लिएर आएका छौ।एउटा प्रेमी र प्रेमिका बिचको सम्बन्ध सिमित अबधि हुदा कति दुखित होलान त्यो प्रेमी।कतै गल्ति गरेकी भन्ने महसुस पनि गर्छन प्रेमी।
छवि र शिल्पाको खटपट सुरु भएसँगै विभिन्न खाले टिकटिप्पणी भैरहेका छन् यसैलाई कथा संग बाधिएको छ,एउटा पत्रले हुन त् दुई बिचको सम्बन्धलाइ कहा अटाउन सक्ला र?। छवि शिल्पा आफैंले पनि प्रेम, विवाह, झगडा र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा बोलिरहेका छन् । हेरौ यो मन रूहाउने प्रेम पत्र-पैसामा माया :
के तपाईको पेटमा ग्याँस भरिने समस्या छ ? यस्ता छन् सजिला उपचार बिधि – यसरि समाघान गर्नुहोस
बेसार मसलाको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु हो । यसको जरा खासगरी परिकारको रंग बदल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ । बेसारलाई नेपालको पश्चीमेली भाषामा हदेली, हदेलो अथवा हल्दी भनिन्छ ।
हल्दीको रंग पहेंलो हुन्छ । हिन्दू धर्ममा पहेँलो रङको छुट्टै महत्व छ भएको कारणले बेसारलाई विशेष महत्व दिईने गरिन्छ । भिटामिन र खनिजको मुख्य स्रोत भएको हल्दिमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी, भिटामिन ए, क्याल्सियम, फस्फोरस, फलामतत्व आदि प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ ।
दूधमा बेसार मिलाएर खाँदा रुघाखोकी सन्चो हुनुका साथै यसलाई महसँग मिसाएर खाएमा टन्सिल निको हुन्छ ।मुख र घाँटीमा घाउ आउँदा बेसार पानीले कुल्ला गर्दा निकै आराम मिल्दछ । पेटमा ग्यास जम्मा हुने, कफ जम्ने, खुट्टा बटारिने जस्ता विभिन्न समस्या हुदा बेसारलाई नुनपानीमा घोलेर बिहान र बेलुका खाएमा ठीक हुन्छ ।
दैनिक अमलाको रसमा बेसार मिसाई सेवन गर्दा मधुमेहका रोगीलाई निकै उपयोगी साबित हुन्छ । छालासम्बन्धी रोगका लागि बेसार निकै प्रभावकारी हुने गर्छ । बेसारको चूर्ण गहतमा मिसाएर लेप बनाई एलर्जी, दाद, लुतोआदि छालासम्बन्धी रोगका विभिन्न समस्या निको हुन्छन् । बेसारलाईसौन्दर्य प्रसोधनका लागि समेत प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले छालामा चमक ल्याउन मद्दत गर्दछ । बिच्छी, बारुला तथा अरिंगाल आदिले टोकेको ठाउँमा काँचो बेसारको लेप लगाउँदा आराम मिल्छ । यसै गरि सुत्न अगाडी दुधमा बेसार मिसाएर पिएमा अनिन्द्राको समस्या हटाउन मद्दत गर्छ ।
दक्षिण एसियामा निकै उपभोग गरिने बेसारका अनेकौ फाइदा छन्। त्यसै खाँदा तितो हुने बेसारले खानाका परिवारलाई स्वादिलो त बनाउँछ नै। बेसारका फाइदा यतिमै सिमित छैन्। बेसारमा प्राकृतिक रुपमै एन्टी सेप्टिक र एन्टि ब्याक्टेरियल तत्वहरु हुन्छन्। जसले गर्दा यसलाई काटो घाउ, जलेको ठाउँ र घाउँमा लगाउन सकिन्छ। चिसो लागेको छ भने पनि बेसारले औसधीको काम गर्छ। मनतातो दुधमा बेसार मिसाएर राति पिउँदा यसले फाइदा गर्दछ। जानकारहरुले बेसारले रगत सफा गर्न र दुखाइ कम गर्ने औषधीक पनि काम गर्ने बताउँछन्। केही अध्ययनहरुले त बेसारले अलजाइमर जस्ता रोगबाट बचाउने वा रोक्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। यसै गरि बेसारले मेटाबोलिजम बढाउने समेत काम गर्दछ। बेसार बहुउपयोगी औषधीय गुण भएको वनस्पति हो। सुन्निने समस्या भएको बेलामा यसको प्रयोग गरिन्छ। घुँडा सुन्निने तथा दुख्ने समस्यामा पनि बेसारको प्रयोग गरिन्छ। धेरै पिसाब लागेमा धेरै पटक पिसाब गरिरहनु पर्ने, पानीको प्यास बढी लाग्ने भएमा वा मधुमेह (डायबिटिज) भएमा पनि बिहान\_बेलुका १\_१ चम्चा शुद्ध राम्रो बेसारको धूलो पानीसँग खाने गरेमा १\_२ हप्तामै ठिक हुन्छ।
आँखाको कमजोरीमा राम्रो शुद्ध बेसारको धूलोलाई गाईको घ्यूमा मुछेर बेलुका सुत्ने बेला लगाउने गरेमा आँखा रातो भएको, घाउ भएको, जालो हुन लागेको धमिलो भएको आदि १\_२ हप्तामा निको गर्छ र सँधै लगाएमा आँखाको कहिल्यौ खराबी हुँदैन।
सुख्खा खोकिमा १ चिम्टी खाने खयर, १ चिम्टी बेसार तातोपानीसँग विहान/वेलुका खाने गरेमा २/३ दिनमा नै सुख्खा खोकि ठिक हुन्छ। कुनैपनि घाउ, खटिरा वा काटेकोमा राम्रो शुद्ध बेसारको धूलो ५० ग्राम २०० ग्राम तोरी वा तिलको तेलमा पकाउने, राम्ररी पाकेपछि छानेर सिसीमा हालेर राख्ने आवश्यकता अनुसार कुनै पनि घाउमा ,कान दुखेमा कानमा हालेर निको पार्न सकिन्छ।
१ चम्चा घ्यू कुमारीको गुदी, १चम्चा राम्रो बेसार १ चिम्टी सिदेनून फिटेर तातो पानीसँग खाली पेट केही दिन खाएमा ठीक हुन्छ। शरीर सुनिएमा मर्केमा ५ ग्राम राम्रो शुद्ध बेसार दूधमा पकाएर बिहान बेलुका २\_४ दिन सेवन गर्नाले शरीरमा सुन्निएको साथै मर्केको पनि ठीक हुन्छ।
आधा चम्चा बेसार दिनको ३ पटक मनतातो पानीसँग खाएमा कफ जमेर हुने कफ ठिक हुन्छ । ज्वानो र बेसार १ चम्चा दिनको ३ पल्ट १ गिलास पानीमा पकाएर खाएमा यसले रुघा पाक्छ र चाँडै आराम हुन्छ।
मूख, घाँटीमा घाउ आएमा २ चम्चा बेसार २ गिलास पानीमा पकाउने र १ गिलास भएपछि गारगल \_कुल्ला दिनको २ पटक गरेमा ठीक हुन्छ।
घ्यू कुमारीको गुदी नित्य बिहान/बेलुका एक एक चम्चा खाने गरेमा वाथरोग ठीक हुन्छ । मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा घ्यू कुमारीको गुदीमा बेसार मिसाउने र तताएर बाँधिदिएमा छिटै दुख्न कम हुन्छ, चोट पनि ठिक हुन्छ।
अनुहार सुख्खा भएमा मेथीको धूलो, बेसार, नीमपातको मिश्रण पानीमा रगडेर बिहान/बेलुका अनुहारमा लगाउने गरेमा डण्डीफोर, चायाँ, दाग, दाद बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा घ्यू कुमारीको गुदीमा बेसार मिसाउने र तताएर बाँधिदिएमा छिटै दुख्न कम हुन्छ, चोट पनि ठिक हुन्छ।